I-Diy Paint Brush, Inayiloni Paint Brush, I-Polyester Paint Ibhulashi - YINGTESHENG
Eminyakeni engaphezu kwamashumi amathathu, "ikhwalithi ngaphezu kwakho konke" ibilokhu iqeqeshiwe emqondweni wabasebenzi.
I-YTS inabasebenzi abangaphezu kuka-300, kufaka phakathi abaklami abangochwepheshe, onjiniyela. Sinekhono lokuthuthukisa izingxenye ezintsha nemikhiqizo yokuhlinzeka amakhasimende ngemikhiqizo ehamba phambili.
Nikeza Ngesevisi Esezingeni Eliphezulu
I-YTS ifake amasethi angaphezu kwekhulu wezinto zokwenziwa kanye nokuhlolwa kwemishini yokuxubha, engathuthukisa ikhono lokukhiqiza le-YTS ngokumangazayo.
YTS has abasebenzi abangaphezu kuka-150 yokukhiqiza workshop futhi sonke baye baqaphela semi-othomathikhi futhi othomathikhi ngokugcwele ukukhiqizwa umugqa imisebenzi. Idizayini yezindawo zokusebenzela ihlelekile futhi inengqondo.
Ku-2005, ukwethulwa kobuchwepheshe nemishini kwavumela i-YTS ukuthi ikhulise ibhizinisi layo ukupenda indawo yokuxubha. Ngawo lowo nyaka, i-YTS yasungula ikomkhulu layo — umkhiqizi eQingyuan Industrial Park, indawo esemaphethelweni edolobha laseBaoding, eHebei. Ihlala ngaphezu kwamamitha ayisikwele angama-700,000, akhiwe isitshalo sokwenza ubristuli esibilisiwe, isitshalo sokudweba intambo, isibambo sokwenza umnyango, ukwenza ibhulashi…
YTS Zokwenziwa intambo 002
YTS zokwenziwa intambo 003
YTS zokwenziwa intambo 004
YTS Zokwenziwa intambo 005
Uchungechunge lwe-YTS Flat Trim 001
Uchungechunge lwe-YTS Flat Trim 002
Uchungechunge lwe-YTS Flat Trim 003
Uchungechunge lwe-YTS Flat Trim 004